Obodo kachasị mma na Cádiz, site na Vejer de la Frontera ruo Medina Sidonia | Njem akụkọ
Louis Martinez | 28/03/2022 19:30 | España, Nduzi
Ọ dị nnọọ mfe iwebata Obodo kachasị mma nke Cadiz. Akụkụ siri ike bụ ịhọrọ ógbè ndị anyị kwesịrị ịgụnye na ndị a ga-ahapụ. N'ihi na ógbè Cadiz dum bụ ihe ịtụnanya na obodo ndị ọcha nwere nnukwu ọmarịcha mma.
Ụfọdụ nọ na Ọ bụ Costa de la Luz na ha na-enye gị nrọ osimiri. N'aka nke ọzọ, ndị ọzọ nọ n'ime ime obodo ma nwee ọmarịcha ihe ncheta na gburugburu ebe obibi mara mma nke ugwu ndị dị ka nke dị na ya mejupụtara. Grazalema, ogige ntụrụndụ dị ka osisi oak na ala mmiri dị ka nke Bonanza, agbakwunyere na Donana. Ọ bụrụ na ihe a niile ị gbakwunye mma nke isi obodo n'onwe ya, akụkọ ihe mere eme Cádiz, ị ga-enwe ọtụtụ ihe mere ị ga-eji mara ógbè a magburu onwe ya. Mana, na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-atụpụta obodo anyị kacha mma na Cádiz.
3 Olvera, obodo n'etiti obodo kachasị mma na Cádiz
5 Arches oke ala
6 Medina Saịdonia, obodo ọzọ mara mma na Cádiz
Spain Square na Grazalema
Ị ga-ahụ obodo a dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ógbè ahụ, kpọmkwem n'ugwu ugwu nke otu aha na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku mita. Njide nke Nnukwu Nkume, ebe a mụrụ osimiri Guadalete ma bụrụ nke mara mma nke obodo White Towns nke Cádiz.
Okporo ámá ya ndị dị warara nke ụlọ ndị e ji ọcha chọọ mma ga-amasị gị. Ma ị kwesịkwara ịga na Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị, ụlọ nsọ e weghachiri eweghachi nke ọma na narị afọ nke XNUMX. Na, karịa ihe niile, bịaruo nso na Ogige Spain, etiti akwara nke obodo ebe Ụlọ Nzukọ Alaeze na ụlọ ụka Aurora dị, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na-esochi canons Renaissance. Banyere ihe owuwu okpukpe, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na ụlọ ụka San Juan de Letrán, obere ụlọ nsọ nwere ihe ịchọ mma Mudejar, na San José, n'ime ya ị ga-ahụ ihe osise nke Kraịst ahụ a kpọgidere n'obe malite na narị afọ nke XNUMX.
N'aka nke ọzọ, n'okporo ámá Las Piedras ị ga-ahụ narị afọ nke XNUMX manor ụlọ, nke nwere nnukwu ọnụ ụzọ na pedimenti ya. Ị nwekwara ike ịgbago na Los Peñascos, Asomaderos ma ọ bụ El Tajo, nke na-enye echiche dị ebube banyere ugwu na ndagwurugwu Guadalete. Ma, ọ bụrụ na-amasị gị ịga ije, ị nwere ike ime otu n'ime ụzọ ụkwụ ụkwụ nwere akara na mpaghara ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgbago na Hermitage nke Calvary, Obere ụlọ nsọ baroque na mkpọmkpọ ebe ma nwee ekele maka echiche sitere na Mirador del Santo.
Iji mechie nleta gị na Grazalema, gaa n'okporo ụzọ ochie nke na-agafe n'osimiri ahụ ma bụrụ ihe na-aga n'ihu nke okporo ụzọ ndị Rom ọzọ nke jikọtara ọmarịcha obodo a na nke obodo ahụ. ubrique.
Echiche nke Vejer de la Frontera
Ọ bụkwa akụkụ nke ụzọ nke White Villages ma ọ dị n’elu ugwu dị ihe dị ka narị mita abụọ n’ịdị elu. Ọ ga-adọta uche gị maka netwọk nke okporo ámá ndị yiri medina Muslim na mgbidi ya nke chebere ya pụọ ​​​​na mwakpo ọ bụla.
Jide n'aka na ileta ya ọ dịghị obere mmasị ụlọ na ụlọ elu dị ka Mayorazgo. N'otu aka ahụ, gaa na Roman aqueduct nke Santa Lucía, na Obí Baroque nke Marquis nke Tamarón, nke nwere obere akụkọ ihe mere eme na ihe ngosi nka ihe ochie, yana ebe obibi ndị nọn San Francisco. Ma anyị na-akwado ka ị gaa na ụka nke Onye nzọpụta Chineke, nke na-ejikọta ụdị Gothic na Mudejar, na hermitage nke Nuestra Señora de la Oliva, n'ime nke ị ga-ahụ ihe osise nke Mexican Juan Correa.
N'aka nke ọzọ, echefula ịnụ ụtọ gburugburu Vejer. Isi site na osimiri dị ka nke n'ime ya El Palmar, ya na ụlọ nche dị n'akụkụ osimiri, na oghere ndị dị ka Park Natural Park nke La Breña na Marismas de Barbate. Mana sitekwa na ụlọ ihe ngosi nka mepere emepe NMAC Foundation, nke jikọtara nka ọgbara ọhụrụ na oke ọhịa Mediterranean.
Olvera, obodo n'etiti obodo kachasị mma na Cádiz
Olvera, otu n'ime obodo kacha mma na Cádiz
N'ịbụ nke dị na mgbada ugwu Sierra de Cádiz, ọ na-ejide aha obodo kemgbe 1877, mgbe ndị ọchịchị nyere ya. Eze Alfonso XII. Ọ na-gburugburu a magburu onwe eke gburugburu ebe obibi nke Zeframagon Rock Reserve, ebe a na-ahụ maka udele griffon, na Sierra Greenway, okporo ụzọ ụgbọ oloko ochie nke dị kilomita iri atọ na asatọ gbanwere ka ọ bụrụ ụzọ njem.
Mana Olvera pụtara, karịa ihe niile, maka ihe ncheta ya. N'ezie, ekwuputala ya Mgbakọ akụkọ ihe mere eme nka. Ọ bụ ịmanye ya na-achị ya ụlọ Arabic site na narị afọ nke XNUMX, e buliri elu n'elu ugwu. Ihe nchekwa nchekwa nke mgbidi ochie bụ nke otu oge ahụ, gụnyere ụlọ elu oghere, nke a na-akpọ Mirador del Duque. Nke a bụ n'ezie Ụlọ nke Cilla, Ọba ochie nke taa nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a na-akpọ La Frontera y los Castillos.
Mana anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ Mpaghara La Villa, nke, kpọmkwem, dị n'ụkwụ nke nnukwu ụlọ ahụ ma bụrụ Arab almedina ochie. N'ime ya, na mgbakwunye na okporo ámá na ụlọ ndị ọcha, ị ka nwere ike ịhụ Torre del Pan, ebe a na-eme achịcha ochie.
N'aka nke ọzọ, isi ihe ncheta okpukpe nke obodo ahụ bụ Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị, wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX na ụdị neoclassical n'elu nke gara aga, nke a na-echekwa apse. Ọ pụtara maka ụlọ elu ya abụọ dị gịrịgịrị na ogologo yana maka marble ọcha dị n'ime.
Anyị na-akwado ka ị hụ ụlọ ụka La Victoria na El Socorro na Olvera, nke mbụ nke oge a na nke abụọ site na narị afọ nke XNUMX na ụdị Gothic-Mudejar. Ọzọkwa, na gburugburu ebe obibi, ị nwere ebe obibi ndị nọn nke Caños Santos, nke e wuru na narị afọ nke iri na isii na onye oge ochie, yana Ebe nsọ nke Nne anyi Ngwọta, site na narị afọ nke XNUMX na nke nwere ihe oyiyi nke onye nlekọta senti nke obodo ahụ.
Ulo olu na Setenil de las Bodegas
Na mgbakwunye na ụda ọcha na-ahụkarị nke obodo ndị dị na mpaghara ahụ, nnukwu ihe dị iche iche nke gụnyere ya n'etiti obodo ndị mara mma na Cádiz bụ ịdị adị nke ụlọ ọgba. Ha nọ n’okpuru nnukwu nkume dị n’etiti obodo ahụ, e wughịkwa ha ka ha gwuo ala n’ugwu ahụ, kama ha na-eji ohere dị n’ugwu ahụ mechie ya.
Setenil dị n'akụkụ Osimiri Trejo n'ogo dị ihe dị ka narị mita isii na iri anọ wee kwupụta ya dị ka saịtị akụkọ ihe mere eme-Artistic. N'ime ya ị ga-agarịrị ụlọ, ebe ewusiri ike Nasrid sitere na narị afọ nke XNUMX nwere mgbidi ya na netwọkụ nke okporo ụzọ ochie. Ụlọ elu nke esi na ya nweta ebe ewusiri ike bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ochie ma taa na-eje ozi dị ka ụlọ ọrụ njem nleta. Ụlọ Nzukọ obodo ọhụrụ, na ụlọ narị afọ nke XNUMX, dịkwa mma.
Mana ị nwekwara ike ịhụ ihe owuwu okpukpe dị iche iche na Setenil. Ọmụmaatụ, hermitages nke San Sebastián, Nuestra Señora del Carmen ma ọ bụ San Benito. Na kwa nke Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị, nke e wuru n’agbata narị afọ nke iri na ise na nke iri na asaa. Agbanyeghị, n'ezie, ọ nwere ụlọ nsọ abụọ, otu Gothic na nke ọzọ Mudejar.
N'ikpeazụ, gaa na Mpaghara La Mina, ebe enwere corach dị egwu mere na mgbidi iji chebe ọbịbịa mmiri na obodo ahụ. Na mita iri atọ, e kewara ya na elu atọ. Ma nke dị ala, bụ ebe ụlọ ọrụ ndị dị n'ime ụlọ ndị na-ebu mmiri mmiri dị, emeela ka e nwee ọtụtụ akụkọ ifo.
Arches oke ala
Castle nke Arcos de la Frontera
Ọ bụ obodo kacha biri na ugwu Cadiz. Ihe mbụ ga-adọrọ mmasị gị mgbe ị bịarutere bụ nnukwu ihe Nkume arches, 185 mita elu na bee na Guadalete River. Obodo ka na-echekwa mgbidi ndị Alakụba na nhazi obodo. Otú ọ dị, ọ bụ ndị Rom tọrọ ntọala ya, dị ka ihe àmà na-egosi saịtị Sierra de Aznar, ọ bụ ezie na e bibuburu ya. N'ime Ọgba Higueral de Valleja a chọtala olili tupu akụkọ ihe mere eme.
Arcos de la Frontera na-esonyere ọtụtụ ihe ncheta maka ịma mma okike ya. Ị nwere ike ịmalite nleta gị site na ụlọ, ebe ewusiri ike nke Andalusian bụ saịtị nke Mmasị Ọdịbendị ma eweghachila ya. Mgbe ahụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị soro Parish Church nke Santa María de la Asunción, ụlọ nsọ wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX na nke jikọtara Mudejar, Gothic, Renaissance na Baroque ọcha.
Ụka San Francisco na San Pedro, nke e mechara na narị afọ nke XNUMX, dịkwa mma nke ukwuu. Emechara ihe nketa okpukperechi nke obodo ahụ site na ebe obibi ndị nọn nke San Agustín na Hospitallọ Ọgwụ de la Caridad. N'aka nke ọzọ, ndị Obí nke Earl nke Ugo, nke e wuru n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX, dị na ụdị Mudejar Gothic na Mayorazgo sitere na narị afọ nke XNUMX, dị ka Ụlọ Nzukọ Alaeze.
N'ikpeazụ, nke Akwa San Miguel Ewubere ya na mmalite nke narị afọ nke XNUMX na, na n'obosara metal latticework, ọ bụ ezi ihe atụ nke ulo oru ije. Ị ga-ahụ ya n'okporo ụzọ na-aga El Bosque na obodo ndị ọzọ dị n'ugwu Cadiz.
Medina Saịdonia, obodo ọzọ mara mma na Cádiz
Obodo Medina Sidonia
Anyị na-akwụsị njem anyị nke obodo kachasị mma na Cadiz n'obodo a, nke bụ isi obodo mpaghara La Janda. N'okwu a, ọ na-echekwa ihe owuwu ya nke oge ochie, yana mgbidi ya na ọnụ ụzọ mbata dị ka nke Belén ma ọ bụ La Pastora, kamakwa okporo ụzọ ya dị warara na nnukwu ụlọ ya. Ndị a bụ abụọ nke sitere na Medina Saịdọn y nke Torrestrella, ma malite na narị afọ nke XNUMX.
Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịhụ n'ime obodo ebe ndị Rome sitere na narị afọ nke mbụ nwere àkwà mmiri ya, okporo ụzọ ya na ọwa mmiri ya. Maka akụkụ nke ya, Stables nke Duke, Town Hall na La Alameda sitere na narị afọ nke XNUMX, ebe Tower nke Doña Blanca sitere na XNUMXth.
Dị ka okpukpe ije nke Medina, pụta ìhè na Isi Ụka Santa María la Coronada, nke e wuru n'agbata narị afọ nke XNUMX na XNUMX n'ụdị Gothic. Jide n'aka na ị ga-ahụ nnukwu ebe ịchụàjà polychrome, nke a na-ewere na ọ kachasị mma na Diocese nke Cádiz dum. Ụka ndị ọzọ dị ka Santiago, San Juan de Dios na La Victoria mara mma nke ukwuu; nke Ebe obibi ndị mọnk nke San Cristóbal na Jesús, María y José; ebe obibi ndị mọnk mebiri emebi nke El Cuervo na hermitages nke Santa Ana, Cristo de la Sangre na Santos Mártires, nke ikpeazụ sitere na oge Visigoth.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime Obodo kachasị mma nke Cadiz. Ma, e nwere ọtụtụ nke na anyị agaghị agwa gị gbasara ha niile. N'ihi nke a, anyị ga-kwuru na-agafe ndị ọzọ dokwara mara mma obodo ndị dị otú ahụ dị ka Zahara de la Sierra, Chipiona, Alcala de los Gazules o Border Conil. Chọghi ima ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Obodo kacha mma na Cadiz
ọdụ ụgbọ elu Paris